ISishingishane Lan sisondela eJapan | Isimo Sezulu Senethiwekhi
AmaJapan alungiselela ukufika kwe isiphepho lan, amashumi amabili esizini ePacific, efinyelele esigabeni 2. Lo mkhuba, oselwandle lwasePhilippines njengamanje, uhamba ngamakhilomitha ayi-15 ngehora ulibangise enyakatho, ubheke eziqhingini zezwe laseJapan.
I-Lan, okwamanje egcine imimoya yamakhilomitha ayi-167 ngehora izofika kuleli qoqo leziqhingi ngeSonto, usuku okulindeleke ukuthi kubanjwe ngalo ukhetho.
1 Uzoba yini umkhondo kaLan?
2 Ingadala muphi umonakalo?
Uzoba yini umkhondo kaLan?
Isithombe - Cyclocane.es
I-Lan yisiphepho esakha empumalanga yeTaiwan ngo-Okthoba 16, 2017. Kusasa, ngoMgqibelo, kulindeleke ukuthi ifike e-Okinawa, futhi iqhubeke nokuya ngasenyakatho-mpumalanga ngenkathi ilahlekelwa ngamandla futhi iba yisiphepho esibi. Ekugcineni, ngoLwesibili kukholakala ukuthi uzobe esesukile ezweni laseJapan.
Kulezi zithombe ezimbili kuzocaca ngokwengeziwe:
Indawo engaba khona yeSiphepho Lan ngeSonto, Okthoba 22:
Indawo okungenzeka ibe khona iTyphoon Lan ngoLwesibili, Okthoba 24:
Ingadala muphi umonakalo?
Imiphumela yeSiphepho Lan ingaba mibi kakhulu. IJapan iyazilungiselela njengoba ilindele ukufika kwezimvula ezinamandla nemimoya, engaba namandla kakhulu kunalokho okuyikho vele. Kokuningi kweKyushu, iShikoku neHonshu kungalimaza izihlahla nezakhiwo, futhi kudale nokunqamuka kukagesi okuningi.. Ngaphezu kwalokho, izikhukhula zasogwini nokukhukhumala kungenzeka kwenzeke ogwini lwasePacific lwalezi ziqhingi okukhulunywe ngazo ngenhla.
Ngenkathi inkathi yesiphepho i-Atlantic ibilokhu imatasa kakhulu esikhathini eside, inkathi yeziphepho yasePacific ibilokhu ithule kakhulu kuze kube muva nje. Kusukela ngo-Okthoba 16, yingxenye kuphela yeziphepho zasezindaweni ezishisayo ezazibikezelwe ezazakhekile; kubo, kube nesiphepho esikhulu esisodwa kuphela: uNau, ekupheleni kukaJulayi.
Sizolandela iSiphepho Lan eduze.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Iziphepho » ISiphepho iLan sisondela eJapane